I-china 2021 yoyilo lobuhle ityuwa yombane kunye nepepile yokusila yabenzi kunye nabathengisi | Nciphisa
Ithini into yokusila ipelepele?
Pyokusila epper yimveliso yasekhitshini esetyenziselwa ukugaya ipepile, ityuwa yolwandle, iziqholo njalo njalo. Ke banokubizwa kanjalo ityiwa yetyuwa okanye i-spice grinder. Amandla epepile esele igqityiwe yahlukile ngokugaya ngokwakho kwincasa kunye nokunambitha, abantu abaninzi bakhetha ukusebenzisa i-grinder ye-pepper.
I-grinder ye-Pepper yahlulwe yangamanyuwali i-pepper grinder kunye ne-grinder yombane , umbane I-pepper grinder yahlulwe yaziintlobo ezimbini zebhetri kunye nokutshaja, imarike isalawulwa ziibhetri iintlobo, ibhetri zombane ipelepele usila ihlala yenziwe ngeqokobhe lensimbi engenasici, isililo se-acrylic, isiseko sokugaya se-ceramic, iqhosha lokuhlengahlengisa iplastikhi, ukwakhiwa kwebhokisi yombane. Kwakhona tubume yokusila kwepepile ngokungqukuva iround.
Umzekelo njengomzekelo wethu ESP-16
I-1.Beaty enomgangatho uyilo lobugcisa kwaye kulula ukuyiqonda;
2. iqhosha elikhulu ukucofa ngokulula;
Ixesha elide lokusebenzisa ixesha kunye neebhetri ze-Nombolo ezisixhenxe ukunciphisa ubungakanani bokubuyiselwa kwebhetri;
4. Isiseko sokusila se-ceramic sinezibonelelo ezininzi kubandakanya impilo, ukhuseleko, ukunxiba okunganyangekiyo, ukunganyangeki umhlwa, ukungabi nasongo, ukutsha;
5.Ubungakanani obufanelekileyo beqhina elinokuhlengahlengiswa ukulungelelanisa entle okanye erhabaxa ukuhlangabezana neemfuno zeencasa ezahlukeneyo;
6. Uyabona ngaphakathi kwindlu yokugcina ngoyilo lwefestile ebonakalayo;
7. Uyilo lwesibane se-LED alikho lula kuphela ukubona inkqubo yokugaya ngokucacileyo, kodwa inokunyusa ukuziva okuhle.
Inyathelo1: Jika ngokwewashi ukuvula indawo yokugcina izinto kwaye usebenzise icephe ukongeza iziqholo kwindawo yokugcina.
Inyathelo2: Tun anticlockwise ukulayisha indawo yokugcina.
Inyathelo3: Vula ibhokisi yemoto kwaye ufake iibhetri ngokuchanekileyo.
Inyathelo4: Guqula iqhagamshelo lokuhlengahlengisa ukulungelelanisa ukutyeba.
Isinyathelo5: Cinezela iqhosha eliphezulu ukuqala ukugaya.
Ingqwalaselo: Nceda uqaphele ukuba kuya kufuneka ukhuphe iibhetri ukuba awusebenzisi ixesha elide.
1. Sineqela loyilo lweemveliso ezigqwesileyo, zilungile kuyilo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ezilungiselelwe wena.
2.Siyazi kakuhle iteknoloji engundoqo ye-grinder ye-pepper, silungile kwi-design and imveliso yesiseko sokugaya. Kukho iindidi ezityebileyo zokugaya, ngokubanzi sikhetha iintlobo ngokobume besixhobo sokuguba, izinto zokugaya kunye nokusebenza ngokugaya, sinokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zamasiko.
Egqithileyo Isampulu yasimahla yeMill Pepper yombane-Ukubaluleka kwetyuwa kunye nepepper Grinder-Trimill
Okulandelayo: Ifektri ngokuthe ngqo 100ml Banokubulawa Manual yesetyu nepepper Grinder
Ityiwa yombane kunye nePepper Grinder Setha
I-Gravity Electric ityuwa kunye nePepper Grinder Setha
Ityuwa kunye nePepper Grinder Setha
Ityuwa kunye nePepper Grinder Misela umbane